INokia 7, phakathi kuluhlu lweNokia entsha ngoku isemthethweni | Iindaba zeGajethi
INokia, ibambisene neHMD Global, ivakalise isiphelo sayo sokugqibela ukugqibezela uluhlu lwazo lweemveliso. AbakwaNokia, kwixa elidlulileyo, besikhe sasebenzisa ukusungula iimveliso ngezinto ezisemgangathweni kunye nokuba sesinye sezalathiso esomeleleyo kwicandelo. Kwaye yile nto ayizamayo kwinqanaba lakhe elitsha. Ukomeleza lo mbono mtsha, mtsha INokia 7, itheminali enesinyithi esisinyithi isiqwenga esinye esiya kwenza ukuba ujonge ngakumbi premium.
INokia 7 yifayile ye- efowuni isekwe kwi Android. Ngokukodwa kwi I-Android 7.1.1 iNougat. Ewe siyazi ukuba ayisiyiyo inguqulelo yakutshanje yomzuzu, nangona isuka kwi-HMD Global sele ivakalisile ukuba zonke iiterminal ziya kuhlaziywa kwi-Android 8.0 Oreo.
Okwangoku, isikrini esibonelelwa sisiphelo zii-intshi ezi-5,2 zidayagonally ngesisombululo esigqibeleleyo se-HD epheleleyo. Iglasi ebisetyenzisiwe igobile (2,5D) kwaye ikhuselwe ngumaleko weglasi yeGorilla. Okwangoku, ngaphakathi kuyiprosesa yeQualcomm, iSnapdragon 630 eneenkqubo ezisibhozo zeenkqubo. Kwaye oku kungakhatshwa ngu Imemori ye-RAM ye-4 okanye ye-6 GB -Ziya kubakho iinguqulelo ezininzi. Ngokomthamo wokugcina, oku INokia 7 inendawo engama-64 GB kwaye inokunyuswa ngenxa yombulelo kwikhadi layo le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-128 GB ephezulu.
Ngokwenxalenye yayo, iikhamera ezihamba neNokia 7 azinayo inzwa ezimbini. Umva kunye nendawo ephambili ine-sensor ye-megapixel eyi-16 kunye neethoni ezimbini ze-LED. Oku kunokwenzeka bamba iividiyo kumgangatho we4K. Ngelixa ikhamera yangaphambili zii-megapixels ezi-5 zokwenza wena uqobo.
Unxibelelwano luphila ngoku kulindelwe kwisiphelo sendlela: I-LTE, i-USB-C (i-OTG), i-NFC, umfundi weminwe, iGPS kunye neBluetooth 5.0. Okokugqibela, ibhetri inomthamo we-3.000 milliamps kwaye itshaja ngokukhawuleza.
Okwangoku, oku INokia 7 izakuthengiswa eChina nge-24 ka-Okthobha Ngexabiso le-2.499 yuan imodeli ene-4 GB ye-RAM (malunga nama-euro angama-320 ukutshintsha). Kwaye inguqulelo ene-6 GB ye-RAM iya kunyuka iye kwi-2.699 yuan (345 euros to change).
Iinkcukacha ezithe vetshe: HMD Global
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » INokia 7, ibanga eliphakathi leNokia entsha ngoku lisemthethweni
Ngaba ayibizi mali ininzi kwizinto zobugcisa ezibonelelayo? Ndibona iifowuni ezine-4GB / 64GB, iikhamera ezi-4 kunye ne-18.9 infinity screen njengeBlackview S8 ebiza kuphela i-127 € kwaye kubonakala kum
Inyani yile yokuba iqine, uchanekile. Kodwa isiqinisekiso sibalulekile.